“M Malitere Ichesi Echiche Ike Ma Ò nwere Uru Ndụ M Na-ebi Baara M” | Baịbụl Na-agbanwe Ndụ Ndị Mmadụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Batak (Toba) Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Kazakh Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maya Mexican Sign Language Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Papiamento (Curaçao) Persian Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Akụkọ Allan Hancock kọrọ
NDỤ M BIRI: ANA M ESE SỊGA, NA-AṄỤ OKÉ MMANYA
M toro n’obere obodo a na-akpọ Warialda nke dị na Niu Saụt Wels. A na-arụ ọrụ ugbo n’obodo a, na-azụkwa anụmanụ na ya. E nwere ndị na-azụ atụrụ na ehi, nweekwa ndị na-akụ mkpụrụ dị iche iche. Obodo Warialda na-adị ọcha, ndị ọjọọ nọ na ya dị ole na ole.
Abụ m nwa mbụ n’ime ụmụ iri nne na nna m mụrụ. Mgbe m dị afọ iri na atọ, m malitere ịrụ ọrụ ka m nwee ike inyere ezinụlọ anyị aka. Ebe ọ bụ na agachaghị m akwụkwọ, m nwetara ọrụ n’ebe a na-azụ anụ n’ugbo. Mgbe m dị afọ iri na ise, m malitere ịzụ ịnyịnya.
Ọrụ m na-arụ n’ebe ahụ baara m uru, ma ọ kpatakwaara m nsogbu. Ọrụ ahụ na-atọ m ụtọ. Ihe ọzọkwa bụ na otú ebe m na-azụ ịnyịnya si maa mma na-eme m obi ụtọ. M na-akwanye ọkụ n’abalị, nọrọ n’akụkụ ya na-ekiri ọnwa na kpakpando ndị dị na mbara ígwè, ifufe ana-efesa m, na-emekwa ka ebe niile na-esi ísì ọma. M chetara ihe na-agbata m n’obi mgbe ahụ, ya bụ, na e nwere Onye kere ihe niile ahụ mara mma m na-ekiri. Ma, ọrụ ahụ m na-arụ mere ka m mụta àgwà ọjọọ. M na-anụkarị ka ndị mmadụ na-akpọ ibe ha iyi. Ebe ahụ m na-arụ ọrụ mere ka m na-enweta sịga mgbe ọ bụla m chọrọ ya. Obere oge, ịṅụ sịga na ịkpọ ndị ọzọ iyi riri m ahụ́.
Mgbe m dị afọ iri na asatọ, m kwagara obodo Sidni. M gbara mbọ ka e were m n’ọrụ agha, ma e kweghị ewe m n’ihi na agachaghị m akwụkwọ. M nwetara ọrụ na Sidni ma nọọ ebe ahụ otu afọ. Ọ bụ n’oge ahụ ka mụ na Ndịàmà Jehova hụrụ. Ha gwara m ka m bịa ọmụmụ ihe ha, mụ ekwere. Mgbe m gara, achọpụtara m ozugbo na ihe ha na-akụzi bụ eziokwu.
Ma obere oge ihe a mechara, m bidoghachiri ịzụ ịnyịnya. M mechara kwaga n’obodo a na-akpọ Gundiwindi, nke dị na Kwinsland. M nwetara ọrụ ma nọrọ ebe ahụ lụọ nwaanyị. Ma, m maliteziri ịṅụ oké mmanya.
Mụ na nwunye m mụrụ ụmụ nwoke abụọ. Mgbe anyị mụchara ha, m malitere ichesi echiche ike ma ò nwere uru ndụ m na-ebi baara m. Echetara m ihe m nụrụ mgbe ahụ m gara ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova na Sidni. M kpebiziri na m ga-eme ihe m mụtara n’ọmụmụ ihe ahụ.
M hụrụ otu Ụlọ Nche ochie nke e dere adres ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova dị n’Ọstrelia. M degaara ha akwụkwọ ozi ma gwa ha na m chọrọ ka ha nyere m aka. Ha dunyere otu nwoke bụ́ Onyeàmà Jehova ka ọ bịa n’ụlọ m. Nwoke a dị obiọma. Obere oge, mụ na ya malitere ịmụ Baịbụl.
Ka mụ na nwoke ahụ na-amụ Baịbụl, m bịara ghọta na m kwesịrị ịkwụsị àgwà ọjọọ ndị m na-akpa. E nwere otu ebe kacha ruo m n’obi na Baịbụl. Ebe ahụ bụ 2 Ndị Kọrịnt 7:1. O kwuru ka anyị “sachapụ onwe anyị mmerụ niile nke anụ ahụ́.”
M kpebiri na m ga-akwụsị ịṅụ sịga, kwụsịkwa ịṅụ oké mmanya. Ọ dịrịghị m mfe ịkwụsị ha n’ihi na ha amarala m ahụ́. Ma, ekpebisiri m ike na mee elu mee ala, m ga-eme ihe dị Chineke mma. Ihe kacha nyere m aka ịkwụsị ha bụ na amalitere m ime ihe e dere ná Ndị Rom 12:2. Ebe ahụ sịrị: “Kwụsịkwanụ ịbụ ndị na-eme omume dị ka usoro ihe nke a si dị, kama gbanweenụ site n’ime ka uche unu dị ọhụrụ.” Achọpụtara m na ọ bụrụ na m ga-akwụsị ihe ọjọọ ndị ahụ m na-eme, m kwesịrị ịgbanwe otú m si eche echiche ma were ihe ndị ahụ m na-eme otú Chineke si were ha, ya bụ, na ha na-emerụ mmadụ ahụ́. Nke a nyeere m aka ịkwụsị ịṅụ sịga na ịṅụ oke mmanya.
“Achọpụtara m na ọ bụrụ na m ga-akwụsị àgwà ọjọọ ndị m na-akpa, m kwesịrị ịgbanwe otú m si eche echiche”
Ma, ihe kacha siere m ike ịkwụsị bụ ịkpọ ndị mmadụ iyi. Ama m ndụmọdụ Ndị Efesọs 4:29 nyere anyị. Ebe ahụ sịrị: “Ka okwu rere ure ghara isi unu n’ọnụ pụta.” Ma nke ahụ emeghị ka m kwụsị ịkpọ ndị mmadụ iyi ozugbo. Abịaziri m chebara ihe e dere n’Aịzaya 40:26 echiche. Nke a nyeere m ezigbo aka. Ebe ahụ kwuru banyere eluigwe nke kpakpando juru. Ọ sịrị: “Lelienụ anya elu hụrụ. Ònye kere ihe ndị a? Ọ bụ Onye ahụ nke na-eme ka ha pụta n’ìgwè ọbụna dị ka ọnụ ọgụgụ ha si dị, ọ na-akpọ ha niile ọbụna n’aha. Ọ dịghị otu n’ime ha ọ na-achọ achọ, n’ihi na ike ya dị ukwuu, n’ihi na o nwekwara ume dị ukwuu.” M ghọtara na ebe ọ bụ na Chineke nwere ike o ji kee ihe ndị ahụ m na-ahụ na mbara ígwé, bụ́ ndị na-eme m obi ụtọ, o doro anya na ọ ga-enyeli m ike m ga-eji gbanwee àgwà ọjọọ ndị m na-akpa ma mewe ihe dị ya mma. Ọtụtụ ekpere m kpere na mbọ m gbara mere ka m jiri nwayọọ nwayọọ kwụsị ịkpọ ndị mmadụ iyi.
Ebe ọ bụ na m na-azụ ịnyịnya, enwechaghị m ohere mụ na ndị mmadụ ịkparịta ụka. Ihe ọzọkwa bụ na ndị na-arụ ọrụ n’ebe m na-arụ ọrụ dị mmadụ ole na ole. Ma, ihe ndị m mụtara n’ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova enyerela m aka ịma otú m ga-esi na-agwa ndị mmadụ okwu. O meekwala ka m na-ekwusara ndị mmadụ ozi ọma Alaeze Chineke.—Matiu 6:9, 10; 24:14.
O teela m bụ okenye n’ọgbakọ Ndịàmà Jehova. Obi dị m ụtọ na m na-eme ihe niile m nwere ike ime ka m nyere ụmụnna m aka. Ihe kacha eme m obi ụtọ bụ na mụ na ezigbo nwunye m na ọmarịcha ụmụ anyị abụọ na-efe Jehova.
Ana m ekele Jehova na ọ na-akụziri m ihe n’agbanyeghị na agachaghị m akwụkwọ. (Aịzaya 54:13) Ekwetara m na ihe Baịbụl kwuru n’Ilu 10:22 bụ eziokwu. Ebe ahụ sịrị: “Ọ bụ ngọzi Jehova na-eme mmadụ ọgaranya.” Mụ na ezinụlọ m na-atụ anya ịmụtakwu ihe n’aka Jehova na ife ya ruo mgbe ebighị ebi.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ “M Malitere Ichesi Echiche Ike Ma Ò nwere Uru Ndụ M Na-ebi Baara M”